musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Will Smith Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Actor anozivikanwa nezita rezita rezita “Muchinda mutsva". Yedu Will Smith Yehuvana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwemutambi weAmerica kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yeupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvemunhu charisma, tsvina-kutema maitiro akanaka uye nokukurumidza wit. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Will Smith's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, titange.
Will Smith Yehuvana Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Willard Carroll Smith Jr inoratidzwa pazasi neyeyeyeyeye mucheche mutambi mutambi yakazvarwa pazuva re25th raGunyana 1968 muPhiladelphia, Pennsylvania, USA
Baby Smith akaberekwa kuna amai vake Caroline Bright (mushandi wechikoro chechikoro muFiladelphia) uye kuna baba vake Willard Smith (anjiniya wefriji).
Smith akakurira pamwe chete nasisi vake mukuru, Pamela Smith pamwe nevechidiki mapatya, Ellen naHarry Smith muWest Philadelphia's Wynnefield Neighborhood kwaaizivikanwa semwana anonakidza anofara-kuenda-rombo rakanaka.
Nekudaro, akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti "Muchinda" nevanoyemura avo vaiziva kuti aive nehunyanzvi hwekushandisa njere nekukurumidza kuti atize nhamo ipapo paakapinda mune imwe.
Kure kure nezviito zvake zvakashata, Smith akada mimhanzi achiri mudiki, akadzidza kuridza piyano kubva kuna amai vake uye akazvidzidzisa kutamba.
Yakanga ichingova nyaya yenguva pamberi pemwana anokurumidza-akangwara uyo aizivikanwa kunge akangwara muchikoro akaita kuda kwake kwemimhanzi nekufambira mberi pakudzidza.
Will Smith Dzidzo:
Smith akanga ane dzidzo yake yepamusoro pa Our Lady of Lourdes Chikoro cheKaturike muFiladelphia vasati vasvika kuOrbrook High chikoro, uyewo muPhiladelphia.
Kunyangwe iyo nguva yekufambira mberi kwake kubva kupuraimari kusvika kusekondari akaona kupatsanurwa kwevabereki vake, Smith anga asiri iye wekurarama nemweya wakadzikira.
Akatanga kubvarura paakakwegura gumi nemaviri, chiitiko chaakaita zvakanyanya zvekuti paakapedza chikoro chesekondari, akafunga kusaenda kukoreji asi kuita basa remumhanzi.
Kunyange zvazvo vakawanda vachitenda kuti Smith akadzosa ruzivo kubva kuMassachusetts Institute of Technology (MIT), akadzinga makuhwa nokucherechedza kuti:
“Amai vangu, vaishandira Chikoro chePhiladelphia, vaiva neshamwari yaive admissions officer kuMIT.
Ndakanga ndine mamakisi akanaka kwazvo eSAT uye vaida vana vatema, saka pamwe ndingadai ndakapinda. Asi ndakanga ndisina chinangwa chekuenda kukoreji ”
Will Smith Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Smith akange ave nemakore gumi nematanhatu paakasangana nemumwe wake wemimhanzi kuti ave, DJ Jeff Townes kumafaro. Hazvina kutora nguva refu vaviri vasati vawana nzvimbo yakafanana mumimhanzi nekutangisa mimhanzi bhendi inozivikanwa se "DJ Jazzy Jeff & Iyo Nyowani Muchinda".
Kusiyana nezvikwata zvemimhanzi zvenguva iyoyo, "DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince" vakaburitsa nziyo dzakareruka moyo dzaive dzisina mutauro wakashata uye une hukasha.
Nekuda kweizvozvo, maalbham avo aive mimhanzi kune nzeve dzinorwadza, achiwana mukurumbira pakati pevanhu vakawanda kusanganisira vana vane vabereki vaivenga maalbubard aive nerevhi rezvevabereki.
Zvisinei nekushoropodzwa kubva kune vaimbi vakaita gangsta rap, Smith nemumwe wake vakanyora kubudirira mubhizimusi, vakawedzera fan fan uye vakave vekutanga rappers kuwana mubairo weGrammy muna 1988.
Will Smith Bio - Simuka Mukurumbira:
Pakati pa1988-1989, Smith akawana izvo zvinogona kutsanangurwa zvakanakisa sekukwira kwehupenyu. Iye rapper uyo akaunganidza hupfumi uye achangogamuchira Grammy akapunzika nekuda kwe $ 2.8 mamirioni backlog yemitero isina kubhadharwa.
Iyo budiriro yakaona iyo 'Yemukati Revenue Service' inotora zvinhu zvaSmith. Ipo muimbi akanyura mumabvi-akadzika muzvikwereti, mukurumbira wake wakaita NBC nhepfenyuro kumubatira kumubatira sitcom (komedhi Tv Show nezvake) inonzi 'The Fresh Prince weBel-Air', muna 1990.
Chirongwa cheTV chakave chakabudirira uye chakaita kuti Smith awane kuzivikanwa semutambi uyo muna1993 akaita rake rekutanga mumafirimu emafirimu neiyo Six Six Degrees.
Makore gare gare, Smith akaridza chinzvimbo chikuru muvhi 'Zuva reRusununguko' iro rakazove rakakura bhokisi-hofisi kubudirira.
Will Smith Anoda Nyaya:
Will Smith ave akaroora kaviri, tinokuendesa mashoko pamusoro pemhuri yake.
Chekutanga yaive yake isingazivikanwe muchato naSheree Zampino mu1992. Vakaroorana vakaroora 'muchato wakagara kwemakore matatu chete vasati varambana mu3.
Izvo, zvakadaro, zvakaburitsa smith wekutanga mwanakomana anonzi Willard Carroll Trey Smith iii (akazvarwa 1992).
Makore maviri mushure mekurambana, Smith akatanga hukama neshamwari yake yekare-nguva akachinja mudzimai, Jada Pinkett.
Jada naSmith vakatanga kufambidzana apo vekare vakanga vachiri vakaroora Sheree, chokwadi icho Jada akazoti anozvidemba. Vaviri vakaroora pa31'st yaZvita 1997 uye vakaramba vakaroora kubvira ipapo.
Mhuri yavo inokomborerwa nevana vaviri mwanakomana anonzi Jaden Smith (akaberekwa muna July 1998) nemwanasikana anonzi Willow Camilla Rein Smith (akaberekwa muna October 2000).
Vechidiki vane vabereki vane mafirimu emagetsi vanoonekwawo mune mafirimu nababa vavo Smith. Mutambi akaonekwa nemwanasikana wake Willow mumufananidzo "Ini Ndiri Ngano", uye nemwanakomana wake Jaden - mumabhaisikopo "Kutsvaga Mufaro" uye "Mushure mePasi".
Will Smith Hupenyu Hwemhuri:
Smith ndiye aiva wechipiri akaberekerwa nemhuri ye6. Tinokuudzai nezvemhuri yake.
Nezve Will Smith Baba:
Baba vaSmith Willard Smith aive sajeni-vekare-vezvekuchera muUS Airforce vakasiya Jobho kuti vadzidzise mumhuri yavo.
Willard uyo akazoshanda sa injinjiniya wefriji anozivikanwa kuti vakadzidzisa vana vake pachiremera chevashandi pamwe nekupedzisa mabasa makuru nekuapwanya kuita matomu.
Kusvika parufu rwake pa 8th yaNovember 2016, Willard aizivikanwa kuve wekutsigira kukuru kuna Smith nevanin'ina vake.
Nezve Will Smith Amai:
VaSmith amai vaCaroline Bright vakashanda sevashandi vebhodhi rechikoro muPhiladelphia panguva yekuzvarwa kwaSmith.
NdiCaroline akasimudzira kuda kwa smith mimhanzi nekumudzidzisa kuridza piyano pamwe nekuona pakurera kwake nekumunyoresa pachikoro chakanakisa cheKaturike mutaundi.
Mukadzi Wedu weLourdes, zvisinei nekuti angave akamugamuchira pachikoro cheveruzhinji chaaishandira.
Nezve Will Smith Vanun'una:
Smith ane hanzvadzi yakakura iyo isingazivikanwi nezvayo nehanzvadzi mbiri duku dzakaberekerwa mapatya.
Pamela Smith, akazvarwa muna 1964 ihanzvadzi yaSmith mukuru uyo ​​anozivikanwa zvishoma nezvake. Anotevera mapatya ehama Ellen naHarry vese vakazvarwa muna 1971. Helen (Kufananidzirwa pasi apa) mudzimaikadzi ane ganda rine ruvara anoshanda sechvudzi uye mifananidzo yekuveza.
Ukuwo rumwe rutivi, Harry ndiye munhu anogadzikana anoshanda seanomubhadhara weWills Trey Ball varaidzo.
Will Smith Untold Biography Chokwadi - Hapana Zvinogamuchirwa:
Will Smith ndomumwe pakati pemaminiti nhamba yeVakakurumbira vakavaka inoshamisa mambure akakosha emadhora mazana mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kubva pamatarenda mashoma uye mashoma emabhizinesi.
"The Fresh Prince" uyo angangodaro asiri kutaridzika kutsva zvakadaro achiri kubhanga mari hombe kubva mumafirimu aakaratidza mukati pamwe nemabhizimusi ayo emakambani epamhepo nemawebhusaiti zvinoita kunge ane mugove mukuru.
Iwo mabhizinesi anosanganisira yekugadzira kambani - Overbrook Varaidzo, Brooklyn-based cosmetic line - Carol's Mwanasikana, Vhidhiyo yekugovana application - Viddy, basketball timu -Philadelphia 76ers, iyo Pinterest-senge webhusaiti - Fancy, Jane Park's runako venture - "Julep" media media kambani - BioBeats , dijitari yekudzidza chikuva - Chromatik pakati pevamwe.
Will Smith Hupenyu hweMunhu:
Will Smith mutambi anokatyamadza uyo anotenda mukugadzira chokwadi kuburikidza nekutenda-kuzvitenda. "Anovimba" Muchinda "anozivikanwawo kusarudza mabatiro ake nokungwarira nekugara kumashure kuti aongorore zviitwa zvebudiriro asati azvipira kuita chero chirongwa.
Iye zvakare anodzosera kunharaunda nekuita muhupiro.
Will Smith Hupenyu Hwechokwadi:
Kunyangwe Will Smith asina kuhwina Oscar iye akatanga kusarudzwa pamubhadharo pamusoro pebasa rake raMuhammad Ali mubiopic Ali. Vatsoropodzi vanotenda kuti akachinjwa kuva nhoroondo yeA Ali mumutambo.
Smith anopesana nedzidzo yezvemadzitateguru uye anoratidza kuonga Scientology (kutsvaka kuzviziva), hazvishamisi, akaisa chikoro chega New Village Leadership Academy iyo inorayira vadzidzi kubva pane zvinyorwa zveScientology.
Iye ndiye mutambi wekutanga munhau kuti atange mafirimu masere mumutsara wakakura kupfuura $ 100 mamiriyoni.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Will Smith Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!